यस्तो पो छोडपत्र ! चर्चामा विश्वकै सबैभन्दा धनी जोडीको सम्बन्ध बिच्छेद – Peacepokhara.com
यस्तो पो छोडपत्र ! चर्चामा विश्वकै सबैभन्दा धनी जोडीको सम्बन्ध बिच्छेद
एजेन्सी । विश्वकै सबैभन्दा धनी जोडी एमेजन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी जेफ बेजोस र उनकी पत्नी मक्केन्जीले २५ वर्षको वैवाहिक जीवनपछि पारपाचुके गर्दैछन्।
यी दुबैले बुधवार ट्विटरमार्फत् एउटा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्दै आफूहरूले सम्बन्धविच्छेद गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । विश्वकै सबैभन्दा मुल्यवान कम्पनीका मालिकको यो सम्बन्ध बिच्छेद विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ ।
‘एकअर्काको साथ पाएकाले हामी दुवै जना आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्छौँ। विवाहपश्चात् हामी यति धेरै वर्ष सँगै बस्यौँ। हामी ती प्रत्येक वर्षका निम्ति हृदयदेखि नै आभारी छौँ।’ पती पत्नीको संयुक्त बक्तब्यमा उल्लेख छ ।
‘लामो समयसम्म प्रेमपूर्वक रहने र केही समय टाढा बस्ने अनुभव गरेपछि हामी दुई जनाले एक अर्कासँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हामी दुवै असल साथीका रूपमा रहनेछौँ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।
‘पच्चीस वर्षपछि हाम्रो सम्बन्धविच्छेद हुन सक्छ भनेर यदि हामीलाई विवाह हुनुअगाडि नै थाहा भइदिएको भए पनि हामीले विवाह गर्ने थियौँ। दम्पतीको रूपमा हामीले एकदम राम्रो जीवन बाँचेका छौँ। साथै अभिभावक, मित्र, साझेदार वा व्यक्तिकै रूपमा पनि हाम्रो भावी जीवन गजबकै हुनेछ।’
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले बेजोसको फक्स टीभीकी एक सञ्चालिका लरेन सान्चेजसँग प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रहेको समाचार प्रकाशित गरेका छन्।
पच्चीस वर्षअघि स्थापित एमेजनले यसै साता माइक्रोसफ्टलाई उछिन्दै सबैभन्दा मूल्यवान् कम्पनी बनेको छ। संसारकै सबैभन्दा धनी एमेजनका संस्थापक ५४ वर्षीय बेजोसको कुल सम्पत्ति १३७ अर्ब डलर बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यो बिल गेट्ससँग भएको भन्दा ४५ अर्ब डलर बढी हो।
अमेरिकी स्टक बजारका पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार एमेजनको कुल मूल्य ७९७ अर्ब डलर पुगेको छ। बीबीसी
peacepokhara 08 Jan 2015
peacepokhara 09 Sep 2014
हिटलरको फोन लिलामीमा बिक्री